#GuptaLeaks: AbakwaGupta kuthiwa ‘balufuna ngenkani’ ucansi ezisebenzini | News24
#GuptaLeaks: AbakwaGupta kuthiwa ‘balufuna ngenkani’ ucansi ezisebenzini
Scorpio and Amabhungane
Cape Town – “Kwaba yimizuzu engu-24 emibi kunayo yonke empilweni yami.”
Lena yindlela umsebenzi owayeyi-Persona Assistance (PA) kaTony Gupta echaza ngakhona isikhathi sakhe emsebenzela. Wahlala usuku olulodwa nje kuphela kulo msebenzi.
Igama lakhe kanye nemininingwane yakhe sekuqinisekisiwe yiScorpio, kodwa ukumvikela, sizombiza ngoChristine.
Bonke abesifazane abakhulume nathi ngalolu daba basidonse ngendlebe ukuthi singalinge sibadalule njengoba besabela ukuphepha kwabo.
UChristine uthi ngosuku lokuqala – futhi okwaba ngolokugcina - esebenzela uTony Gupta, kwadingeka ukuthi amphelezele ohambweni lwebhizinisi olwaluzoba sebusuku lusuka eGoli luya eKapa. Ngesikhathi esebhanoyini elikhethekile (private jet) lo mndeni wakwaGupta, uTony Gupta akazange akhulume nhlob naye. Bathi bangafika endlini eseKapa wabe esenikwa isiphuzo, iCoke, waphinde watshelwa ukuthi akavumelekile ukusebenzisa ucingo lwakhe noma ngabe inini.
“Ngangingakwazi nokwazisa umyeni wami ukuthi ngiphephile lapho ngikhona,” kukhumbula uChristine. Wabe eseyalelwa ukuba aye egunjini lokulala “emhlanganweni” noTony Gupta.
“Wangitshela ukuthi wonke ama-PA akhe kulindeleke ukuthi amuwotawote (massage) futhi alale embhedeni ofanayo naye,” kusho uChristine. “Ngamutshela ukuthi angikhululekile ngalokho futhi ngingathanda ukuba nombhede wami kanye negumbi lokugezela. Wabe esengicela ukuthi ngimuwotawote. Nganqaba.”
Uthi ngaso sonke isikhathi ekule ndlu akazange anikwe ukudla, kodwa wayelokhu encengwa ukuthi aphuze iCoke.
OLUNYE UDABA: Ubufakazi bokuthi ama-website aseka abakwaGupta alawulwa eNdiya
“Ngaphuza enye iCoke futhi angazi ukuthi kwenzakalani, kodwa kwaba sengathi bengiphuza [utshwala],” kusho uChristine.
Ngesikhathi uTony Gupta enomhlangano kwenye ingxenye yendlu, kusolwa ukuthi waqhubeka nokukhiyela uChristine egunjini lokulala. Efikelwa ukwesaba – ingekho futhi into azoyenza ngokuthi isiphuzo sakhe kungenzeka ukuthi sifakwe okuthile okudakanayo - uChristine wabe esethatha umakhalekhukhwini wakhe wafonela umyeni wakhe wabe esemtshela ukuthi kwenzakalani.
"U[Tony Gupta] wangena wabe esengibuza ukuthi ngenzani. Wangitshela ukuthi angivumelekile ukuba socingweni.” UChristine wabe esemtshela ukuthi ugogo wakhe usevele washona isigubhukane, ukuze ezothola ithoba lokuhamba. “Wabeka izingalo zakhe kumina wabe esethi ‘Awuhambi’,” usho kanje.
Ngaleso sikhathi laba baphazanyiswa ngowesifazane uTony Gupta ayekade ebambe uhlangano naye, nokuyinto uChristine athi iyona eyamlamulela ukuthi avunyelwe ukuthi ahambe.
“Ngagijima ngaphuma ngesango ngokushesha ngashiya izinto zami ezintathu endlini, okubalwa ne-charger yamakhalekhukhwini,” usho kanje engeza ngokuthi waze wacasha esikhotheni elinde isihlobo ukuthi sizomlanda.
Wabe esefaka incwandi yokwesula ngesizathu sokuhlukunyezwa ngokucansi nevelile kuma-email aputshuka, ama-#GuptaLeaks.
Umyeni kaChristene wabuza abakwaGupta ngalokhu maqede wanikwa u-R10 000 kwathiwa akahambe. AbakwaGupta basola yena uChristine ngokuthi ubedansa ngendlela evusa imizwa.
Omunye umsebenzi othintwe yiScorpio owayesebenzela abakwaGupta uthi yizinto ezijwayelekile lezi. Usola ukuthi kungenzeka ukuthi izikhathi eziningi abakwaGupta bakhipha imali ukuze zingeke ziphumele emphakathini lezi zinsolo.
Omunye umsebenzi wesithathu wesifazane owayesebenzela abakwaGupta iminyaka, nesizombiza ngo-Janet ukumvikela, utshele iScorpio: “Zontathu izinsizwa [zakwaGupta] sezake zazama inhlanhla kumina.”
U-Ajay Gupta, uJanet uthi, “wazama ukungenza ngimthinte ngendlela engafanelekile”. UTony Gupta kusolakala ukuthi wamsabisa ukuthi enze izinto eziwumusa ophathelene nocansi uma ngabe efuna ukugcina umsebenzi wakhe.
“Ngagcina lolu lwazi kumina ukuze ngigcine umsebenzi wami, nengangiwudinga kakhulu ngaleso sikhathi,” kusho uJanet. Uthi wayehlale njalo enikwa ‘izipho’ ukuze ezothula. Ngemuva kwazo zonke izigameko [ezingafanelekile], bengithola ‘inkokhelo’ encane ngomsebenzi wami onzima.”
U-Ajay Gupta, uJanet uthi, “wayeziphoqelela kumina bese engiqabula izikhathi eziningi. Ekugcineni ngavele ngakuyekela kwenzeka ukwenza isiqiniseko sokuthi angilahlekelwa umsebenzi wami. Ubethatha isandla sami asifake phansi kokokugqoka kwangaphansi kwakhe.”
UJanet kwakulindeleke nokuthi ‘ajabulise’ izichukuthwane eziphezulu.
Ummeli womndeni wakwaGupta uyalele ukuba kukhulunywe noGary Naidoo ukuphawula ngalolu daba. Yena ube esenikeza ikheli le-email yomnyango wezokuxhumana enkampanini yabakwaGupta, i-Oakbay, nokugcine kungathelanga zithelo.